के छ त ८ खण्ड रहेकाे अध्यक्षद्वयकाे प्रतिवेदनमा ? – Everest Dainik – News from Nepal
के छ त ८ खण्ड रहेकाे अध्यक्षद्वयकाे प्रतिवेदनमा ?
काठमाडौं, मंसिर २९ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्तरुपमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
उनले भने, “पार्टीको साङ्गठनिक एकीकरणको अहिलेसम्मको अवस्था र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सरकार सञ्चालनको नौ महीनाका अवधिमा सरकारले गरेका काम कारवाहीका बारेमा समीक्षा र अब सरकारले गर्नुपर्ने कार्यदिशाका रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।”
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै राजनीतिक दलको भूमिकाका बारेमासमेत अध्यक्षले पेश गरेको प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको उनले बताएयो ।
अध्यक्ष र नेता गौतमले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गर्न नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सोमबार बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्नेछ । रासस
ट्याग्स: KP oli, Prahcand